प्रेम आलेलाई प्रश्न: तपाईले किन ओलीको साथ छाडेर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभयो ? – Purba Aawaj
प्रेम आलेलाई प्रश्न: तपाईले किन ओलीको साथ छाडेर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभयो ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०४, २०७८ समय: १२:३२:०४
२२ एमाले सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । यससँगै देउवाले १६५ मत पाए । एमालेको १२१ सांसद भएपनि विपक्षमा ८३ मत मात्र परेको छ । एक जना भने तटस्थ बसेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज विश्वासको मत लिंदा नेकपा एमालेका १८ सांसद अनुपस्थित भए । उनीहरु मध्ये कतिपय मतदानको समयमा प्रतिनिधि सभा बैठक छाडेर निस्किएका हुन् ।
मतदान बहिष्कार गर्नेहरुमा अधिकांश एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु छन् । उनीहरुले पार्टीको दुवै पक्षको उच्च नेतृत्वलाई दबाब दिने भन्दै मतदानमा अनुपस्थित जनाएका हुन् ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल स्वास्थ्योपचारका क्रममा नयाँ दिल्लीमा रहेकाले अनुपस्थित रहे । माधव नेपाल पक्षमा पुगेका बामदेव गौतमकी पत्नी सांसद तुलसा थापा जापानमा भएकाले अनुपस्थित भइन् । उनी टोकियो ओलम्पिकमा पदाधिकारीका रुपमा पुगेकी हुन् ।
यसैगरी एमालेका नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, दिपकप्रकाश भट्ट, झपट रावललगायत सांसदहरु पनि मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।
आलेले उक्त बैठकको निर्णय उल्लंघन गरिदिए । आइतबार राति भएको मतदानमा उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सांसदसँगै ‘फ्लोर क्रस’ गरे र देउवाका पक्षमा विश्वासको मत दिए। उनीसँगै ओली पक्षका अरू ८ सांसदले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिए।
सोमबार बिहान एक मिडियाले सांसद आलेलाई तपाईंले किन ओलीको साथ छोड्नु भयो भनेर सोधेको थियो। जवाफमा आलेले यसबारे आफूले अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए। ‘म अहिले यसबारेमा केही बोल्दिनँ। दुई-चार दिनपछि भन्छु,’ उनले भने।
आलेले मुखै खोलेर नभने पनि ओलीले आफूलाई मन्त्रीबाट हटाएपछि नै उनी असन्तुष्ट थिए। निकटस्थहरूका अनुसार पाँच महिनामै ओलीले आफूलाई अपमानजनक तरिकाले मन्त्रीबाट हटाएको असन्तोष आलेलाई छ। त्यही भएर उनी पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता नेपालसँग नजिकिएका थिए।
स्रोतहरूका अनुसार नेपालसहितका एमाले सांसदहरूको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि आले उनलाई भेट्न बुढानिलकण्ठ नै पुगेका थिए। यद्यपी उनले यो कुरा स्वीकारेका छैनन्। साझा नेपाल बाट
Last Updated on: July 19th, 2021 at 12:32 pm
१७१० पटक हेरिएको